खण्डहरमा उभिएर हेर्दा - Himalkhabar.com
टिप्पणीशुक्रबार, साउन ९, २०७१
खण्डहरमा उभिएर हेर्दा
विगत लामो समयदेखि त्रिचन्द्र क्याम्पसमा हुने कार्यक्रममा म सहभागि भएको थिइन। कस्तो विडम्वना ६ गते कार्यक्रममा त्रिचन्द्र पुग्दै गर्दा त्यहाँ न वी.पि.को नाममा खोलिएको पुस्तकालय थियो न पूर्व निर्धारित रक्तदान कार्यक्रम नै।
थियो त केवल खण्डहर ,जलेका पुस्तकहरुको खरानी र त्यसमाथि अलपत्र परेको थियो वि.पि.को भनाई उल्लेखित पत्र-” शैक्षिक स्थल बाहुबालको प्रयोग गर्ने ठाँउ होईन यो त विचारको द्वन्द्वात्मक भुमि हो’।
आफु स्व.वि.यु सभापति हुँदा स्थापित पुस्तकालयका पुराना स्मृतिका पानाहरू पल्टाउदै एक किसिमको शोकसभामा सहभागि भएको जस्तो अनुभुति भयो त्यतिवेला। वी.पि., विचार, पुस्तकालय र त्रिचन्द्र हामी सवैलाई गिज्याईरहेको थियो त्यो खण्डहरले।
मलाई अहिले पनि स्मरण छ, हामीले पुस्तकालय बनाएको ठाँउमा त्यतिवेलासम्म जिमखाना रहेको थियो, जसमा क्याम्पस वाहिरका व्यक्तिहरु सहभागि हुनेगर्थे। हामीले त्यो परम्परा हटाउदै त्यसमा वी .पि. पुस्तकालय र वाचनालय वनाउने निर्णय गर्यौ।
हाम्रो त्यो अबधारणालाई साथ दिएर प्रत्येक बिद्यार्थीले भर्ना हुँदा उपहारस्वरुप दिएका पुस्तकहरू जम्मा गरेर यो पुस्तकालयको स्वरुप वनेको हो।
यो पुस्तकालयसंग प्रत्येक विद्यार्थीको उत्तिकै स्नेह जोडिएको छ। जसले यसमाथी आक्रमण गर्योु ती विद्यार्थीको चरित्र बोकेको व्यक्ति होईनन र हुन सक्दैनन। अपराधिक कार्यमा संलग्न जुनसुकै संगठन वा समुहमा आवद्ध भएको होस त्यो अपराधी नै हो र दण्डित हुनैपर्छ।
अपराधिलाई अपराधिकै आंखावाट हेरौं राजनितिक आंखावाट होईन। यस संगै जुन प्रवृति शिक्षण संस्थाभित्र हावि भइरहेको छ त्यसको अन्त्य जरूरी छ। त्यसका लागी हामी सवैले आफैतर्फ फर्केर सोचौं र पार्टी एवम विद्यार्थी संगठन भित्र मौलाएको अराजकताको अन्त्यका लागि दृढसंकल्पित वनौ।
अहिले पनि पुस्तक र पुस्तकालयलाई माया गर्ने हजारौं विद्यार्थी र सुभचिन्तकहरू क्याम्पस भित्र र वाहिर हुनुहुन्छ।
वी.पि. स्मृतिका दिनमा त्यो खण्डहरमा उभिएर फेरि पुस्तकालयलाई आम विद्यार्थी र शुभचिन्तककै साथ र सहयोगमा पुनस्थापित गर्ने संकल्प गरेका छौं जसरी त्यतिवेला प्रत्येक विद्यार्थीको साथ, सहयोग र स्नेहवाट वी.पि. पुस्तकालयको स्थापना गरेका थियौ।